Izimvo zikaGore kutshintsho lweMedia media | Martech Zone
NgoMvulo, Agasti 28, 2006 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
URuth Holladay blog namhlanje yalatha inqaku kudliwanondlebe noAl Gore kwaye ubuza izimvo zakhe kumajelo eendaba. Ngokukodwa, udliwanondlebe ubuza uMbindi kugqibo lwamajelo eendaba, nokuba yimibutho okanye ngoorhulumente (bamanye amazwe). Gore ithi:
Idemokhrasi yincoko, kwaye eyona ndima ibalulekileyo yamajelo eendaba kukuqhuba incoko yedemokhrasi. Ngoku incoko ilawulwa ngakumbi, isembindini ngakumbi. -Al Gore
Wowu. Ukungabi ngumlandeli weGore, ndiyamangaliswa kwaye ndonwabile ngokunyanisekileyo ngomyalezo wakhe apha. Ndingomnye waba bafana bakholelwa ngokwenyani ukuba abeendaba ntoni zama ukuphembelela imeko yethu yezopolitiko.
Sukundenza impazamo ... kunathi sonke. Ngenxa yoko, uluvo lwabo ngehlabathi luye lwahluka. Ukongeza, inyani yokuba bafundisiwe kwaye bakwigunya eliphandle, bane-pulpit yokuxhaphaza izimvo zabantu.
Ukubhloga kunye ne-Intanethi kuyayitshintsha loo mhlaba. Emva kokubhalisela amaphephandaba ama-2 ngaphezulu kweshumi leminyaka, andinakuyichola kwakhona. Ndizifundile zonke iindaba zam kwi-intanethi, kwaye ndafunda indlela abasabela ngayo kwi-blogosphere kwiindaba. Rhoqo kunokuba kungenjalo, ndiqala ukubona iindaba ezininzi ezithathwa ziibhlog kunamaphephandaba. Ndicinga ukuba esinye sezizathu kukuba ukubhloga kususa 'ukuhluza' umyalezo.
URute blog ngumzekelo omangalisayo woku. URuth ukhululwe kwiibhondi zomhleli kwaye ibhlog yakhe ibetha indlela yayo eya phambili kwindawo yokubhloga yaseIndiana. Ndiyayithanda. Emva kokufunda amanqaku kaRuth iminyaka, andizange ndibone uthando kunye namalangatye kumyalezo wakhe ade athathe umhlala phantsi kwaye aqale ukubhloga. URuth ufana nenkunzi yenkomo ephuncuke kwivenkile yasechina! Ndingavumelani nomyalezo wakhe ngamanye amaxesha, kodwa andinakulinda ndifunde umyalezo wakhe olandelayo.
Ithemba lam kukuba i-Intanethi izakuqhubeka nokuba yindlela entsha "yokuququzelela loo ncoko yedemokhrasi". Ndiyathemba ukuba ibonelela ngemegaphone kwabo bangathethiyo kwihlabathi lethu kwaye apha kuluntu lwethu. Amagama asephepheni anamandla ngenene… ngakumbi xa engalawulwa.
Phila intetho yasimahla!
IVeki yoShishino kwi-Poll ye-Intanethi: Yeyiphi ibhlog oyithandayo?